एसएस राजामौलीको ‘आरआरआर’मा आलियाको पारिश्रमिक ६ करोड! « News24 : Premium News Channel
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट एसएस राजामौलीको ‘आरआरआर’ फिल्ममार्फत् साउथ इन्डष्ट्रीमा डेब्यू गर्दैछन् । यो फिल्ममा अभिनेत्री आलिया सीताको भूमिकामा देखिनेछन् । आलियाको सीता लुक पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार यो फिल्मको लागि अभिनेत्री आलियाले मोटो पारिश्रमिक लिदैछन्, जसले पूरै साउथ इन्डियन सिनेमाको रेकर्ड ब्रेक गर्ने भएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार ‘आरआरआर’ फिल्म गरेवापत् आलियाले रु. ६ करोड भारु पारिश्रमिक लिदैछन् ।
हालसम्म साउथ इन्डष्ट्रीका कुनै पनि अभिनेत्रीहरुले यति ठूलो पारिश्रमिक लिएका छैनन् । साथै, अभिनेत्री आलियाले समेत अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोजेक्टबाट यति धेरै पारिश्रमिक लिएकी छैनन् ।
‘बाहुबली’ फेम एसएस राजामौलीको निर्देशनमा बन्दै गरेको ‘आरआरआर’मा अभिनेत्री आलियाको भूमिका निकै चाखलाग्दो राखिएको छ । त्यसोत, यस अगावै अभिनेत्री आलियाले गल्ली ब्वाई, राजी, हाइवे, उड्ता पञ्जावलगायत फिल्मबाट सबैको मन जितिसकेकी छन् ।
अभिनेत्री आलियाको अपकमिङ प्रोजेक्टहरुमा करण जोहरको ब्रह्मास्त्र रहेको छ । यो फिल्मलाई अयान मुखर्जीले निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्ममा रणवीर कपूर पनि मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । यसका साथै उनी गंगुबाई काठियावाडीमा पनि देखिनेछन् ।